ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအများကြီးရှိတယ် မြင်းစီးအားကစားစည်းကမ်းများသူတို့ကိုအကြား စီးနင်းအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းဤသည်တွင်မြင်းကိုတိတိကျကျထိန်းချုပ်ထားခြင်း၊ မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိခြင်း၊ စီးနင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ လိုအပ်သောအသိပညာဆိုလို မြင်းများကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည်။
ဤနေရာတွင်မြင်းစီးခြင်းနှင့်မြင်းများကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အားကစားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမမေ့နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောပြproblemsနာများမရှိစေရန်၊ မြင်းများသည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်တိရစ္ဆာန်များကိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောအစားအစာများကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
စီးနင်းခြင်းဆိုသည်မှာအားကစားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ ကြွက်သားများကိုသေစေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
por ကားလို့စ်ဂါရစ်ဒို လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးစီးနင်းသင်ခန်းစာ
စီးနင်းခြင်း, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်၏အပြင်ဘက်တွင်တစ်အားကစားဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကိုမပြောပါနဲ့ ...
ကျွမ်းကျင်သောမြင်းစီးသူရဲသည်တစ်နေ့တွင်မြင်းများစွာစီး။ မပြတ်စီးနိုင်သည်။ များစွာသော ...
အဆိုပါအရန်ကျောက်ကပ်နှင့်၎င်းတို့၏အန္တရာယ်များ (III ကို): အchambón
ဒီနေ့ decontracting အကြောင်းပြောမယ်၊ Juan Francisco F. Muñozပြောသလို "မီးသီးကိုညှစ်နေတယ်" မင်္ဂလာရှိသော "စာချုပ်မချုပ်ဆို!" ဟုတ်ကဲ့…